‘Ivai Nechokwadi Chezvinhu Zvinonyanya Kukosha’ | Yokudzidza
“Muve nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi.”—VAF. 1:10.
Zvakaratidzwa Isaya, Ezekieri naDhanieri zvinoita kuti tive nechivimbo chei?
Tinowana chidzidzo chipi patinofunga nezvekunyatsoisa pfungwa pabasa kwechikamu chesangano raJehovha chepanyika?
Nyaya ino yaita kuti utsidze mumwoyo kuitei?
1, 2. Uprofita hupi hwemazuva okupedzisira hunofanira kunge hwakabata pfungwa dzevadzidzi vaJesu, uye nei?
PETRO, Jakobho, Johani naAndreya vainge vava voga naTenzi wavo. Mashoko ainge ambotaurwa naJesu nezvekuparadzwa kwetemberi ainge achivadya mwoyo. (Mako 13:1-4) Saka vakabvunza kuti: “Tiudzei, Zvinhu izvi zvichaitika rini, uye chii chichava chiratidzo chokuvapo kwenyu nechokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho?” (Mat. 24:1-3) Jesu akatanga kuvaudza zvinhu zvaizochinja chaizvo upenyu hwevanhu uyewo zvaizoratidza kuti ainge ava mazuva okupedzisira enyika yakaipa yaSatani. Pane chinhu chimwe chete chinofanira kuva chakanyanya kubata pfungwa dzevadzidzi vaJesu. Ataura zvinhu zvisingafadzi zvakadai sehondo, kushomeka kwezvokudya, uye kuwedzera kwokusateerera mutemo, Jesu akavaudzawo chimwe chinhu chakanaka chaizoratidza kuti ainge ava mazuva okupedzisira. Akati: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika.”—Mat. 24:7-14.
2 Vadzidzi vaJesu vainge vamboparidza mashoko akanaka oUmambo vaina Kristu. (Ruka 8:1; 9:1, 2) Vanogona kunge vakayeuka kuti akati: “Chokwadi, kukohwa kukuru, asi vashandi vashoma. Naizvozvo kumbirai Tenzi wokukohwa kuti atumire vashandi mukukohwa kwake.” (Ruka 10:2) Asi vaizoparidza sei “munyika yose inogarwa” uye vopa “uchapupu kumarudzi ose”? Vashandi vacho vaizobva kupi? Kudai musi iwoyo wavakanga vakagara naJesu vaikwanisa kuziva zvaizoitika munguva yemberi, chokwadi vaizoshamiswa chaizvo nokuzadziswa kwemashoko iwayo mashoma atinoverenga pana Mateu 24:14!
3. Ruka 21:34 iri kuzadziswa sei mazuva ano, uye tinofanira kuzviongorora sei?
3 Tiri kurarama munguva iri kuzadziswa uprofita hwaJesu. Vanhu vane mamiriyoni vakabatana kuti vaparidze mashoko akanaka oUmambo munyika yose. (Isa. 60:22) Zvisinei, Jesu akaratidza kuti mumazuva ano okupedzisira, vamwe vaizoomerwa nokuramba vakaisa pfungwa pabasa iri. Vaizotsauswa uye ‘vaizoremerwa.’ (Verenga Ruka 21:34.) Tiri kuonawo mashoko iwayo achizadziswa. Vamwe vanhu vaMwari vari kutsauswa. Izvi zvinogona kuonekwa nemabasa avanosarudza, dzidzo yepamusorosoro, pakuunganidza pfuma, uyewo nguva yavanopedzera pamitambo nekuzvivaraidza. Vamwe vari kuneta nemhaka yematambudziko uye kuzvidya mwoyo neupenyu. Zvibvunze kuti: ‘Ini ndiri kuita sei? Zvandinosarudza zvinoratidza kuti ndinonyanya kukoshesei?’
4. (a) Pauro akanyengetera kuti vaKristu vomuFiripi vaitei, uye nei akadaro? (b) Munyaya ino neinotevera tichakurukurei, uye nechinangwa chei?
4 VaKristu vepakutanga vaifanira kushanda nesimba kuti kunamata kurambe kuri pokutanga muupenyu. Muapostora Pauro akaona kuti aifanira kunyengetera kuti vaya vaiva muFiripi vave “nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi.” (Verenga VaFiripi 1:9-11.) Kufanana nemuapostora Pauro, vakawanda kare ikako ‘vaitonyanya kuratidza ushingi kuti vataure shoko raMwari vasingatyi.’ (VaF. 1:12-14) Vakawanda vedu mazuva ano vanoparidzawo Shoko raMwari noushingi. Kunyange zvakadaro, kufunga zviri kuitwa nesangano raJehovha kungatibatsira here kuwedzera kuisa pfungwa pabasa rinokosha chaizvo rokuparidza? Chokwadi kunogona kutibatsira! Munyaya ino, ngatifungisisei urongwa hwakaitwa naJehovha kuti Mateu 24:14 izadziswe. Sangano rake rinonyanya kukoshesa chii, uye kuziva izvozvo kungatikurudzira sei isu nemhuri dzedu? Munyaya inotevera tichakurukura zvingatibatsira kutsungirira uye kuramba tichifambirana nesangano raJehovha.
CHIKAMU CHESANGANO RAJEHOVHA CHOKUDENGA CHIRI KUFAMBA
5, 6. (a) Nei Jehovha akaratidza vashumiri vake zvakaita chikamu chesangano rake chokudenga? (b) Ezekieri akaonei pane zvaakaratidzwa?
5 Jehovha ane zvakawanda zvaasina kuita kuti zvinyorwe muShoko rake Bhaibheri. Somuenzaniso, haana kutipa udzamu hwokushanda kunoita uropi kana kushanda kunoita zvinhu zvose zvakasikwa, kunyange zvazvo taizonakidzwa chaizvo nokuziva mashoko iwayo! Asi, Jehovha akatipa mashoko atinoda kuti tinzwisise zvinangwa zvake uye kuti tirarame maererano nazvo. (2 Tim. 3:16, 17) Zvinofadza chaizvo kuti Bhaibheri rinotipa nzwisa yemamiriro akaita chikamu chesangano raJehovha chokudenga! Tinofara chaizvo patinoverenga tsanangudzo dzeurongwa hwaJehovha hwezvinhu kudenga dzakanyorwa naIsaya, Ezekieri, uye Dhanieri uye zvakataurwa naJohani muna Zvakazarurwa. (Isa. 6:1-4; Ezek. 1:4-14, 22-24; Dhan. 7:9-14; Zvak. 4:1-11) Zvinoita sokuti Jehovha akaita kuti tikwanise kudongorera kudenga kuti tione zvakwakaita. Nei akatiudza mashoko aya?
6 Jehovha aida kuti tisambokanganwa kuti tiri chikamu chesangano rake riri kudenga nepanyika. Pane zvakawanda zviri kuitwa zvatisingaoni pakutsigira zvinangwa zvaJehovha. Somuenzaniso, Ezekieri akaratidzwa chikamu chesangano raJehovha chokudenga chinomirirwa nengoro huru yokudenga. Ngoro iyi yaimhanya chaizvo uye yaigona kuchinja kwayainge yakananga ipapo ipapo. (Ezek. 1:15-21) Ngoro yacho yaifamba daro rakareba chaizvo nokungotenderera kamwe chete kwemavhiri ayo. Ezekieri akaratidzwawo zvishoma nezveainge akagara pangoro iyoyo. Akati: “Ndakaona chimwe chinhu chakanga chakaita sokupenya kwechinhu chakagadzirwa nendarama nesirivha, chakaita somoto mukati macho mose . . . Kwakanga kwakaita sokubwinya kwaJehovha.” (Ezek. 1:25-28) Chokwadi Ezekieri anofanira kunge akashamiswa chaizvo nezvaakaratidzwa! Akaona kuti Jehovha ndiye ari kutungamirira sangano rake rose, achishandisa mudzimu wake mutsvene. Zvechokwadi mafambiro engoro iyoyo anoratidza mashandiro anoshamisa echikamu chesangano raJehovha chokudenga!
7. Zvakaratidzwa Dhanieri zvinoita sei kuti tive nechivimbo?
7 Dhanieri ane zvaakaonawo zvinoita kuti tive nechivimbo. Akaratidzwa Jehovha, “Akakwegura Pamazuva,” akagara pachigaro choumambo chine mirazvo yemoto. Chigaro choumambo chacho chaiva nemavhiri. (Dhan. 7:9) Jehovha aida kuti Dhanieri aone kuti sangano rake riri kufamba, richizadzisa chinangwa chake. Dhanieri akaonawo “mumwe munhu akafanana nomwanakomana womunhu,” Jesu, achipiwa masimba okutarisira chikamu chepanyika chesangano raJehovha. Utongi hwakazonaka hwaKristu hahusi hwemakore mashomanana chete. Asi, “ushe hwake ushe hunogara nokusingagumi, husingazopfuuri, uye umambo hwake ndohuya husingazoparadzwi.” (Dhan. 7:13, 14) Izvozvo zvinoita kuti tivimbe naJehovha uye tizive zvaari kuita. Akapa “ushe nokukudzwa noumambo” kuMwanakomana wake, Jesu, waakaona kuti anonyatsokwanisa. Jehovha anovimba neMwanakomana wake. Saka tinogonawo kuvimba neutungamiriri hwaJesu.
8. Zvakaratidzwa Ezekieri uye Isaya naJehovha zvakaita kuti vanzwe sei, uye zvinofanira kuita kuti tinzwewo sei?
8 Zvakaratidzwa vashumiri vaMwari nezvechikamu chesangano raJehovha chokudenga zvinofanira kuita kuti tinzwe sei? Chokwadi tinoshamiswa uye tinonzwa taninipiswa nezviri kuitwa naJehovha sezvakaita Ezekieri. (Ezek. 1:28) Kufungisisa nezvesangano raJehovha kunoita kuti tive nechido chokuita basa sezvakaita Isaya. Pakamuka mukana wokuti audze vamwe zvaiitwa naJehovha, haana kumbozeza kuushandisa. (Verenga Isaya 6:5, 8.) Isaya aivimba kuti Jehovha aizomubatsira kuti akunde zvipingamupinyi zvose. Saka, iyi nzwisa yechikamu chatisingaoni chesangano raJehovha inoitawo kuti tishamiswe uye tikurudzirwe kuita zvakawanda. Chokwadi tinokurudzirwa chaizvo patinofunga nezvechikamu chesangano ichocho chiri kuramba chichifamba uye chakabatikana nokuzadzisa zvinangwa zvaJehovha!
CHIKAMU CHESANGANO RAJEHOVHA CHEPANYIKA
9, 10. Nei chikamu chesangano raJehovha chepanyika chichidiwa?
9 Achishandisa Mwanakomana wake, Jehovha akaita kuti panyika pave nechikamu chesangano chinoshanda chakabatana nechokudenga. Nei chikamu ichocho chepanyika chichidiwa pakuzadzisa basa rinotsanangurwa pana Mateu 24:14? Funga zvikonzero zvitatu.
10 Kutanga, Jesu akataura kuti basa iri rokuparidza raizoitwa nevadzidzi vake “kusvikira kurutivi ruri kure kwazvo rwenyika.” (Mab. 1:8) Chechipiri, paizodiwa urongwa hwokuti vaya vaizoita basa iri vapiwe zvokudya zvokunamata uye vatsigirwe. (Joh. 21:15-17) Chechitatu, paizofanira kuitwa urongwa hwokuti vaparidzi vemashoko akanaka vaungane vachinamata Jehovha uye vadzidziswe kuita basa racho. (VaH. 10:24, 25) Zvose izvi zvaisazongoitika zvoga. Kuti vateveri vaKristu vabudirire, basa racho raizofanira kunyatsorongwa.
11. Tinoratidza sei kuti tinotsigira urongwa hunoitwa nesangano raJehovha?
11 Tinoratidza sei kuti tinotsigira urongwa hunoitwa nesangano raJehovha? Imwe nzira inokosha ndeyokugara tichivimba nevaya vakagadzwa naJehovha naJesu kuti vatungamirire basa redu rokuparidza. Vaya vari kutitungamirira vaigona kunge vachiitawo zvimwe zvinhu zvakawanda zviri munyika, asi havasi kudaro. Ngationei kuti chikamu chesangano raJehovha chepanyika chave chakaisa pfungwa pachii.
KUISA PFUNGWA ‘PAZVINHU ZVINONYANYA KUKOSHA’
12, 13. Vakuru vechiKristu vanoita sei mabasa avo, uye nei izvozvo zvichikukurudzira?
12 Vakuru vechiKristu vagara nebasa vari munyika yose vakagadzwa kuti varonge uye vaite kuti basa rokuparidza Umambo rikurumidze kuitwa munyika dzavanogara. Hama idzi padzinosarudza zvokuita, dzinotsvaga mazano muShoko raMwari dzichiriita ‘rambi retsoka dzavo panzira yavo’ uye dzinonyengetera nemwoyo wose kuti dzitungamirirwe naJehovha.—Pis. 119:105; Mat. 7:7, 8.
13 Vakuru vechiKristu vanotungamirira basa rokuparidza mazuva ano vakazvipira “paushumiri hweshoko” sezvaiitwa nevaitungamirira ungano yepakutanga. (Mab. 6:4) Vanofara chaizvo nekufambira mberi kuri kuita basa rokuparidza mashoko akanaka munyika dzavo uye munyika yose. (Mab. 21:19, 20) Havadzike mitemo yakawanda-wanda. Asi vanoita zvinotaura Magwaro uye vanobvuma kutungamirirwa nemudzimu mutsvene waMwari pavanenge vachironga zvinoita kuti basa rokuparidza rienderere mberi. (Verenga Mabasa 15:28.) Hama idzi padzinoita izvozvo dzinoratidza muenzaniso wakanaka kune vose vari muungano dzekwavanogara.—VaEf. 4:11, 12.
14, 15. (a) Urongwa hupi huripo hwokutsigira basa rokuparidza munyika yose? (b) Unonzwa sei nezvauri kuita pakutsigira basa rokuparidza Umambo?
14 Pane zvakawanda zvatisingaoni zvinoitwa nehama dzedu pakunyora mabhuku, zvinoshandiswa pamisangano nemagungano. Kune vashanduri vane zviuru vanoshanda nesimba chaizvo kushandura zvinhu izvi mumitauro inenge 600 kuitira kuti vakawanda vadzidze “zvinhu zvikuru zvaMwari” mumitauro yavo. (Mab. 2:7-11) Hama nehanzvadzi dzechiduku dzinoshanda pakudhinda uye kubhainda mabhuku edu nemichina yepamusorosoro. Mabhuku aya anobva aendeswa kuungano, dzimwe dzacho dziri kure chaizvo.
15 Pane zvakawanda zvakarongwa kuitira kuti tiise pfungwa pakuparidza mashoko akanaka muungano dzedu. Somuenzaniso, vakawanda vanozvipira kubatsira pakuvaka Dzimba dzoUmambo nedzemagungano, kubatsira vanenge vawirwa nenjodzi kana kuti nourwere hunoda kukurumidzirwa, kuronga magungano uye kudzidzisa zvikoro zvesangano. Aya anongova mabasa mashoma atisingaoni paanoitwa. Chinangwa chemabasa ose aya ndechei? Ndechokuita kuti mashoko akanaka aparidzwe, kusimbisa pakunamata vaya vanoita basa iri, uye kufambisira mberi kunamata kwechokwadi. Chokwadi chikamu chesangano raJehovha chepanyika chave chakaisa pfungwa pazvinhu zvinonyanya kukosha!
TEVEDZERA MUENZANISO WESANGANO RAJEHOVHA
16. Chii chamunogona kudzidza nezvacho muri moga kana kuti nemhuri dzenyu?
16 Tinombowana nguva yokufungisisa zvave zvichiitwa nesangano raJehovha here? Vamwe vakasarudza kutsvakurudza uye kufungisisa nyaya idzi pamanheru okunamata kwemhuri kana kuti pavanodzidza vari voga. Tinogona kunakidzwa nokudzidza zvakaonekwa naIsaya, Ezekieri, Dhanieri, uye Johani. Bhuku rinonzi Zvapupu zvaJehovha—Vazivisi voUmambo hwaMwari uye mamwe mabhuku kana kuti maDVD anowanika mumutauro wenyu anotaura zvinonakidza chaizvo nezvesangano.
17, 18. (a) Nyaya ino yakubatsira sei? (b) Tinofanira kufunga mibvunzo ipi?
17 Kufungisisa zviri kuitwa naJehovha achishandisa sangano rake kwakatinakira. Pamwe chete nesangano iri rakazonaka, dai tikatsunga kuramba takaisa pfungwa dzedu pazvinhu zvinonyanya kukosha. Kuita izvozvo kuchatisimbisa kuti titsidze mumwoyo medu sezvakaita Pauro, akanyora kuti: “Zvatiine ushumiri uhwu maererano nengoni dzatakaratidzwa, hatineti.” (2 VaK. 4:1) Akakurudzirawo vaaishanda navo kuti: “Tisarega kuita zvakanaka, nokuti mumwaka wakakodzera tichakohwa kana tisinganeti.”—VaG. 6:9.
18 Somunhu oga kana semhuri, pane zvatinofanira kugadzirisa here kuti tive nechokwadi chezvinhu zvinonyanya kukosha pane zvatinoita zuva nezuva? Tinogona here kuita kuti upenyu hwedu husava netwakawanda-wanda kana kuti tisatsauswe kuitira kuti tinyatsoita basa rokuparidza rinokosha kupfuura mamwe ose? Munyaya inotevera tichakurukura zvinhu zvishanu zvichatibatsira kuramba tichifambirana nesangano raJehovha.